Tag: ahịa iguzosi ike n'ihe » Martech Zone
Tag: ahịa iguzosi ike n'ihe
Ịgụ Oge: 2 nkeji N'inwe ọdịnihu akụ na ụba a na-ejighị n'aka, ọ dị oke mkpa na azụmaahịa na-elekwasị anya na njigide ndị ahịa site na ahụmịhe ndị ahịa na ụgwọ ọrụ maka iguzosi ike n'ihe. M na-arụ ọrụ na mpaghara nnyefe nri na usoro ụgwọ ọrụ ha mepụtara na-aga n'ihu na-eme ka ndị ahịa na-alọghachi ugboro ugboro. Ọnụọgụ ndị ahịa nke iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa Dị ka akwụkwọ akụkọ Whiteian, Buildingmepụta Iguzosi Ike n'Ihe Nleba Anya na World Cross-Channel: 34% nke ndị bi na United States nwere ike ịkọwa dị ka ndị na-eguzosi ike n'ihe nye ndị 80% nke ndị na-eguzosi ike n'ihe na-ekwu
Ịgụ Oge: 3 nkeji Coronavirus agbagotela azụmaahịa ma na-amanye azụmaahịa ọ bụla ka ọ na-eleba anya na okwu iguzosi ike n'ihe. Iguzosi Ike n'Ihe Nye Ndị Ọrụ Na-atụle iguzosi ike n'ihe site n'aka onye ọrụ. Azụmahịa na-ahapụ ndị ọrụ aka ekpe na aka nri. Ọnụọgụ enweghị ọrụ nwere ike karịa 32% n'ihi Coronavirus Factor ma na-arụ ọrụ site na ụlọ anaghị anabata ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla. Aychụ ndị ọrụ bụ ihe ngwọta dị mma maka nsogbu akụ na ụba… mana ọ naghị ahụta iguzosi ike n'ihe. COVID-19 ga-emetụta
Atụmatụ dị irè maka Omni-Channel Communication
Tuesday, June 18, 2019 Monday, June 17, 2019 Samuel Kellett
Ịgụ Oge: 5 nkeji Nkowa di nkenke banyere ihe Omni-channel bu nkwurita okwu ya na ihe ngosiputa di iche iche di n’ime ya maka ndi ahia ka ha nwekwuo iguzosi ike n’ihe nke ndi ahia ha.
Ọdịnaya Ọdịnaya: Chefuo Ihe He Nuru Ruo Ugbu a ma Bido Nweta Nduzi site na isoro ntuziaka a
Tọzdee, Febụwarị 15, 2018 Sọnde, Febụwarị 18, 2018 Stefan Des
Ịgụ Oge: 6 nkeji Ọ na - esiri gị ike ịmepụta ndu? Ọ bụrụ na ị zara ee, ị gaghị anọ naanị gị. Hubspot kọrọ na 63% nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na ịmepụta okporo ụzọ na ụzọ bụ isi ịma aka ha. Mana ị nwere ike ịnọ na-eche: Kedu ka m ga - esi wee nweta ahịa m? Ọ dị mma, taa a ga m egosi gị otu esi eji ahịa ọdịnaya ewepụta azụmaahịa gị. Marketingre ahịa ọdịnaya bụ usoro dị irè ị nwere ike iji mepụta ndu
1 2 ... 6 Ọzọ →
Page 1 nke 6